Global Voices teny Malagasy » Vondrona Ara-poko Shiliana: Fandrosoana Mamely Ny Zon’ny Teratany? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Janoary 2018 15:03 GMT 1	 · Mpanoratra Rosario Lizana Nandika Miranah
Sokajy: Amerika Latina, Shily, Fitantanam-pitondrana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka
Víctor Toledo  (ES), avy ao amin'ny Foiben'ny Politikam-bahoaka sy ny Zon'ny Teratany namoaka tranga manontolo mikasika ity toe-javatra ity. Lleu-Lleu dia toerana iray, ahitana fianakaviana Mapuche miisa 17 mety ho voakasiky ny fanapahan-kevitry ny governemanta hanokatra tobim-pitrandrahana iray, izay mbola tetikasa anatin'ny fanombanana ara-toekarena. Nilaza izy fa tsy manaja ny zon'ny vazimba teratany, izay efa tsy voaaro ao amin'ny taniny manokana ny governemanta, izay ny fanaovana izany no fomba tokana hihazonana ny tsy fanombinana ny olona teratany. Mahatsiaro ihany koa izy fa arovan'ny lalàna ny vazimba teratany, saingy mandinika lohahevitra lalina kokoa izy: ny anjara asan'ny governemanta.
Tranga iray hafa ny fanamboarann'ny orinasa Espaniola Endesa ny tohodrano ao Ralc, izay namindrana toerana fianakaviana indizeny miisa 381 hialany amin'ny faritra ho tondra-drano. Votsotra avokoa ireo toerana misy fasana sy ny toeram-ponenan'ny razambe rehetra. Nanatontosa lahatsary fanadihadiana momba ireo tranga ireo ny Espaniola iray mpamokatra horonantsary ary manazava tsikelikely ny fomba fiasan'ny governemanta sy ny orinasa mba hanatanterahana ny tetikasa. Amin'ny lohateny “Lahatsary fanadihadiana iray mampiseho ny famonoan'ny Endesa ny vahoaka Mapuche”, mitantara ny zava-misy ao amin'ilay faritra ny bilaogy EspaniolaTeruel  (ES)..
Miasa mba hampianatra sy hampahafantarana momba ny zo ara-tontolo iainana sy ny zon'ny indizeny ny tambajotra nasionaly antsoina hoe “ Tambajotran'ny Hetsika Ara-Tontolo Iainana sy ny Rariny Ara-tsosialy “. Ny ankamaroan'ireo fikambanana nasionaly dia voasoratra anarana ao, ary tsy manana tranonkala na bilaogy ny ankamaroany ary maro no tsy hita ao amin'ny gazety ao an-toerana.
Mapuexpress  (ES) indray dia pejy ahitanao ny vaovao rehetra sy ny momba ny ahiahin'ny vondrom-piarahamonina indizeny Shiliana, indrindra fa ny Mapuche.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/01/22/113789/
 Tambajotran'ny Hetsika Ara-Tontolo Iainana sy ny Rariny Ara-tsosialy: http://ecoterritorios.blogspot.com/